'IRoma yaseBritane' inokuphulukana neNqanaba leLifa leMveli le-UNESCO
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » 'IRoma yaseBritane' inokuphulukana neNqanaba leLifa leMveli le-UNESCO
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Umtsalane omkhulu wokhenketho kwi-66.5 yeekhilomitha (i-107 yeekhilomitha) kumazantsi mpuma eLondon, iCanterbury isemngciphekweni wokuphulukana nobuhle bayo kunye nembali yayo ngokuvumela inani elandayo lezinto ezimbi neziphelelwe lixesha ngaphakathi, okanye kufutshane, nesiseko sembali yesixeko, esisabiyelwe ngaphakathi kwayo Ukujikeleza kweendonga zamaxesha aphakathi.
ICanterbury ijongene nomngcipheko wokutshatyalaliswa, litsho iqela lemveli.
I-UNESCO inokuhlutha indawo yaseCanterbury kwiLifa leMveli yeHlabathi.
Ukhenketho luxabisa phantse i-700 yezigidi zeedola ngonyaka kuqoqosho lwaseCanterbury.
SAVE I-Heritage yase-Bhritane, elinye lamaqela aphambili e-UK, ikhuphe ingxelo namhlanje ilumkisa ukuba isixeko se-UNESCO seLifa leMveli leHlabathi sijamelene nomngcipheko wokutshatyalaliswa ngokungakhathali.
Umtsalane omkhulu wokhenketho kwi-66.5 yeekhilomitha (i-107 yeekhilomitha) kumazantsi mpuma eLondon, Canterbury usemngciphekweni wokuphulukana nobuhle nembali yakhe ngokuvumela ukwanda kwenani lezinto ezimbi neziphelelwe lixesha ngaphakathi, okanye ezikufutshane nesiseko sembali sesixeko, esisabiyelwe ngaphakathi kwisekethe yeendonga zamaxesha aphakathi, latsho iqela lemveli kwingxelo.
Imeko yaseCanterbury isondela kwimeko kaxakeka yesizwe, yongeze yatsho.
Isixeko sinokulandela iLiverpool esandula ukuhluthwa UNESCO Ubume beLifa leMveli yeHlabathi, uPtolemy Dean, umongameli weCanterbury Society, ulumkisile.
Ukhenketho lwamva nje olufumanekayo oluxabisekileyo luxabisa phantse i-700 yezigidi zeedola zaseMelika ngonyaka kuqoqosho lwaseCanterbury. Isixeko sitsala malunga nabakhenkethi abazizigidi ezingama-65 ngonyaka ngaphambi kobhubhane we-COVID-19.
ICanterbury yaziwa ngokuba yicawa yayo entle, ikhaya leCawe yaseNgilani, elasekwa ngonyaka we-597 AD, kunye nesakhiwo sangoku esivela kwi-1070.